अनलाइनमा कल गर्ल खोज्दा एक युवक यसरी लुटिए ! -
अनलाइनमा कल गर्ल खोज्दा एक युवक यसरी लुटिए !
यसरी लकडाउनका बीचमा कल गर्न खोज्नका लागि एजेन्ट खोजिरहेका उनी नराम्रोसँग फसेका हुन् । यदि तपाईं पनि यस्तो काम गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने कृपया एकपटक अवश्य ठन्डा दिमागले सोच्नुहोला । माथि उल्लेख गरिएको सबै रकम नेपाली रुपैयाँ अनुसार हो । यो कुरामा कोही पनि भ्रममा नपर्नुहोला । Source: Janaboli.com